काठमाडौं । ‘तन्नेरी बाघको अघि बूढो स्याल’को हविगत कस्तो होला ? यस पटक कमलादीमा उस्तै हालतमा पुगे केही कांग्रेसी कर्मचारीहरू । गत शनिबारदेखि सुरु भएर मंगलबारसम्म भएको आठौँ महाधिवेशनबाट फेरि कांग्रेसी कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी गोपालप्रसाद ...
काठमाडौं । पहिला पार्टीको जिम्मेवारीमा उपाध्यक्ष पदमा केपी ओली । अध्यक्ष भएपछि केन्द्रीय समिति, स्थायी समितिजस्तो निकायले संस्थागत सुधारमा गम्भीरता देखाएन । पार्टी एकता भयो, चुनावमा नेकपा ठूलो दल बन्यो । नेताहरू त्यसैमा रमाएका थिए । नेकपा भयो त्यसले ...
२६ माघ २०७८, बुधबार ०५:४९ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on जनक शिक्षा डुबाउने खेल जारी
काठमाडौं । तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उनका एक जना सहयोगी पत्रकारमार्फत जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमा विवादित पात्रलाई नियुक्त गरे । एक वर्षअघि त्यहाँ नियुक्त भएका अनिलकुमार झाले आफ्नो कर्तुतहरू देखाउन थालेका छन् । झाले सरकारी संस्थान...
काठमाडौं । सरकारले एक जना कनिष्ठ कर्मचारीलाई हवाई अड्डाको हाकिम बनाएर पठाउँछ । अनि त्यही हाकिमले कुनै मन्त्री वा नेताले झैं गलाभरि हुने गरी पचासौँ किलोको माला थाप्छ भने यसलाई कुन अर्थमा र कसरी बुझ्ने ? अझैं रोचक त उसलाई माला लगाउने कर्मचारीहरूभन्दा व...
काठमाडौं । एउटा गरिमामय संस्था थियो सर्वाेच्च अदालत र अर्काे थियो लोकसेवा आयोग, जहाँ राजनीति छिरेको थिएन । तर, पछिल्लो चरणमा यी निकायसमेत विवादमा तानिँदैछन् । नेतृत्वका कारण यी निकायहरू पछिल्लो चरणमा चरम विवादमा परिरहेका छन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष...
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सचिव एकनारायण अर्याल श्रममा पुगेपछि त्यहाँ दिनेश थपलियाका नातेदार सुरेश अधिकारी सचिव बनेर पुगेका छन् । अहिले उनै सचिव अधिकारीले कर्मचारी प्रशासनमा बसेर विगतमा बद्नामी कमाएका उपसचिव रविन्द्रजंग ...
७ पुष २०७८, बुधबार ०४:०७ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on मन्त्रीको निर्देशन १० दिनमै उल्टियो कर्मचारी प्रशासनमा आयुक्त थपलिया हाबी
काठमाडौं । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा उपभोक्ता समितिहरू स्थानीयस्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्नपश्चात समिति विघटन हुने उल्लेख गरिएको थियो । परिपत्रमा मन्त्रालयले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आय...
कर्मचारी ओलीकै फेभरमा
७ पुष २०७८, बुधबार ०४:०५ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on कर्मचारी ओलीकै फेभरमा
काठमाडौं । अहिले एमाले सत्तामा छैन । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म उ प्रतिपक्षकै हैसियतमा छ, तर पनि ब्युरोक्रेट (कर्मचारीतन्त्र) एमाले त्यसमा पनि ओलीकै फेभर हुने गरी काम गरिरहेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो, माधव नेपाल खेमामा खुलेर अहिले सहरी विकासमन्त्री निय...
७ पुष २०७८, बुधबार ०३:०८ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on तीन तहको सरकार, तीन तिरका कर्मचारी विकासको काम अलपत्र
काठमाडौं । स्थानीय तवरसम्म सेवासुविधा पु¥याउने उद्देश्य बोकेर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आयो । सरकार तीन तहको भएसँगै कर्मचारी पनि तीन तहमा विभाजित हुन पुगे । यसरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा तीन तहका कर...
२ पुष २०७८, शुक्रबार ०४:०० Tamakoshi SandeshLeaveaComment on कर्मचारी संगठनभित्र झगडा गर्नेदेखि अकुत कमाउनेसम्म
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको ।’ अहिले यो उखान कर्मचारी प्रशासन, निजामती कर्मचारी संगठन र आधिकारिक टे«ड युनियनमा चरितार्थ भएको छ । अहिले कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड यूनियनमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युन...